Ọrụ nke ndị nlekọta na oge nlekọta nsogbu | Law & More B.V.
blog » Ọrụ nke ndị nlekọta na oge nlekọta nsogbu
Ọrụ nke ndị nlekọta na oge nlekọta nsogbu
Na mgbakwunye na nke anyị n'ozuzu ederede na Supervisory Board (nke a 'SB'), anyị ga-achọ ilekwasị anya na ọrụ nke SB n'oge nsogbu. N'oge nsogbu, ichebe ụlọ ọrụ na-aga n'ihu dị mkpa karịa mgbe ọ bụla, nke mere na a ga-atụlerịrị ihe dị mkpa. Karịsịa n'ihe gbasara ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ na ọdịmma dị iche iche nke ndi ozo tinyere. Ọ bụ ọrụ siri ike nke SB ziri ezi ma ọ bụ ọbụlagodi na nke a? Nke a dị mkpa kpọmkwem na ọnọdụ ndị dị ugbu a na COVID-19, n'ihi na nsogbu a nwere mmetụta dị ukwuu na ịga n'ihu ụlọ ọrụ ahụ na nke a bụ ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ na SB kwesịrị ịgba mbọ hụ. N’isiokwu a, anyị kọwara etu nke a si arụ ọrụ n’oge nsogbu dị ka ọgba aghara ugbu a. Nke a gụnyere oge nsogbu na-emetụta ọha mmadụ n'ozuzu ya, yana oge dị oke egwu maka ụlọ ọrụ n'onwe ya (dịka nsogbu ego na iweghara ego).
Ọrụ nke iwu nke Nlekọta Nlekọta
Ọrụ nke SB maka BV na NV ka edobere na paragraf nke 2 nke edemede 2: 140/250 nke DCC. Ndokwa a na-agụ, sị: “Ọrụ nke ndị nlekọta ọrụ bụ na-elekọta atumatu nke ndi isi ochichi na ndi isi ulo oru na ndi oru ya. Ọ ga - enyere aka ndị nlekọta na ndụmọdụ. N'ime arụmọrụ nke ọrụ ha, ndị nduzi ga-eduzi ndị nduzi ọdịmma nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ metụtara ya. ” Ewezuga nlebara anya nke ndị isi nchịkwa (mmasị nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ metụtara ya), isiokwu a ekwughi ihe ọ bụla gbasara mgbe njikwa nlekọta dị mma ziri ezi.
Nkọwa ọzọ banyere ọrụ bara uru nke SB
N'ime akwụkwọ na iwu ikpe, akọwapụtara ọnọdụ ndị a ga-eji na-elekọta ha. Ọrụ nlekọta ahụ na-emetụtakarị: ịrụ ọrụ nke ngalaba njikwa, atụmatụ ụlọ ọrụ, ọnọdụ ego, amụma gbasara ihe egwu na nnabata ya na iwu. Na mgbakwunye, akwụkwọ ahụ na-enye ụfọdụ ọnọdụ pụrụ iche nke nwere ike ịpụta n'oge nsogbu mgbe nlekọta na ndụmọdụ dị otú ahụ nwere ike ịmalite, dịka ọmụmaatụ:
Nnabata na iwu nsogbu ọhụrụ
Mgbanwe nke (ize ndụ) atụmatụ
Enweghị ma ọ bụrụ ọrịa
Ma gịnị ka nlekọta a kwalitere gụnyere? O doro anya na ọrụ nke SB ga-agarịrị nanị n'ịkwado amụma njikwa mgbe ihe omume gasịrị. Nlekọta nwere njikọ chiri anya na ndụmọdụ: mgbe SB na-ahụ maka atụmatụ dị ogologo na atụmatụ amụma nke njikwa, ọ na-abịa inye ndụmọdụ. N'akụkụ a, a na-echekwa ọrụ na-aga n'ihu maka SB, n'ihi na ọ bụghị naanị na ndụmọdụ ka a ga-enye mgbe njikwa ahụ rịọrọ ya. Karịsịa n'oge nsogbu, ọ dị oke mkpa ịnọ n'elu ihe. Nke a nwere ike ịgụnye ịlele ma atumatu na usoro a kwekọrọ na ọnọdụ akụ na ụba ugbu a na nke ọdịnihu yana ụkpụrụ iwu, na-enyocha nyocha nke nhazigharị na inye ndụmọdụ dị mkpa. N'ikpeazụ, ọ dịkwa mkpa iji compass omume gị na ọkachasị ịhụ akụkụ mmadụ karịa akụkụ ego na ihe egwu. Amụma mmekọrịta nke ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ dị mkpa ebe a, n'ihi na ọ bụghị naanị ụlọ ọrụ kamakwa ndị ahịa, ndị ọrụ, asọmpi, ndị na-eweta ngwaahịa na ikekwe obodo niile nwere ike ịmetụta nsogbu ahụ.
Oke nke nyocha onyunyo
Dabere na nke dị n'elu, o doro anya na n'oge nsogbu enwere ike ịtụ anya ka ọrụ SB siri ike karị. Agbanyeghị, kedu opekempe na oke kachasị? E kwuwerị, ọ dị mkpa na SB na-eburu ezigbo ibu ọrụ, mana enwere oke oke na nke a? Ndi SB nwekwara ike ijikwa ụlọ ọrụ, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ na enwere oke nkewa nke ọrụ nke naanị ndị njikwa na-ahụ maka ijikwa ụlọ ọrụ ahụ, dị ka ọ pụtara na Dutch Civil Code? Akụkụ a na-enye ihe atụ nke otu esi eme na ekwesighi ime ihe, dabere na ọtụtụ usoro n'ihu Chamberlọ Ọrụ priselọ Ọrụ.
Iji nye ụfọdụ ihe atụ nke otu SB ekwesịghị isi rụọ ọrụ, anyị ga-ebu ụzọ kwuo ụfọdụ ihe atụ sitere na ndị a ma ama OGEM ikpe. Ikpe a metụtara ụlọ akụ na-akwụ ụgwọ na ụlọ ọrụ na-ewu ihe, ebe ndị na-ekenye òkè na usoro nyocha jụrụ ụlọ ọrụ Enterprise ma enwere ihe kpatara mgbagha nke njikwa ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị. Nke a gosipụtara nke ụlọ ọrụ Enterprise:
“N’akụkụ a, priselọ ọrụ a na-akpọ Enterprise ewerela dị ka eziokwu gbara ọkpụrụkpụ na ngalaba nlekọta ahụ, n'agbanyeghị akara nke ruru ya n'ụdị dị iche iche na nke gaara enye ya kpatara ịjụ maka ozi ndị ọzọ, emeghị atụmatụ ọ bụla na nke a ma etinyeghị aka. N'ihi nkwupute a, dị ka ụlọ ọrụ Enterprise si kwuo, usoro mkpebi nwere ike ime n'ime Ogem, nke na-akpata nnukwu mfu kwa afọ, nke mechara bụrụ opekata mpe Fl. Nde 200, nke bụ ụzọ akpachapụghị anya nke ime.
Site n'echiche a, ụlọ ọrụ Enterprise gosipụtara eziokwu ahụ metụtara mmepe nke ọrụ owuwu ihe n'ime Ogem, e mere ọtụtụ mkpebi nke ndị nlekọta nke Ogem arụghị ọrụ nlekọta ya ma ọ bụ na ha arụzighị ọrụ ya nke ọma, ebe mkpebi ndị a, n'ihi ọghọm nke ọrụ owuwu ihe ndị a butere, dị ezigbo mkpa nye Ogem. "
Ihe omuma atu ozo nke ndi SB n’oge nsogbu di Laurus ikpe. Ikpe a metụtara nnukwu ụlọ ahịa na usoro ịhazigharị ('Operation Greenland') nke a ga-arụ ọrụ ihe dị ka ụlọ ahịa 800 n'okpuru otu usoro. Inye ego nke usoro a bụ nke dịkarịsịrị na mpụga, mana a tụrụ anya na ọ ga-aga nke ọma na ire ọrụ ndị na-abụghị isi. Agbanyeghị, nke a emeghị dị ka atụmatụ na n'ihi otu ọdachi na-esote, ụlọ ọrụ ahụ ga-eresị mgbe enweghị ego dara. Dabere na ụlọ ọrụ Enterprise, SB kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ karịa n'ihi na ọ bụ nnukwu ọrụ na ihe egwu. Dịka ọmụmaatụ, ha ahọpụtala onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-enweghị retail Ahụmahụ, kwesịrị ịhazi oge ịchịkwa maka mmejuputa atumatu azụmaahịa ma kwesiri itinye nlekọta siri ike n'ihi na ọ bụghị naanị ịga n'ihu nke iwu na-aga n'ihu.
na Eneco ikpe, n'aka nke ọzọ, ọ dị n'ụdị mmezigharị ọzọ. N'ebe a, ndị na - ekenye ọha na eze (ndị jikọtara ọnụ na 'kọmitii na-ekenye ndị ọzọ') chọrọ ire oke ha na atụmanya nke ịchụ nta ego. Esemokwu dị n'etiti kọmitii ndị nwere òkè na SB, yana n'etiti kọmitii ndị nwere òkè na njikwa. Ndị SB kpebiri ka ha na ndị Kọmitii Kọmitii kparịta ụka na-enweghị ịkpọtụrụ ndị nlekọta njikwa, emesịa ha mechara mkpebi. N'ihi ya, ọbụna esemokwu ka bilitere n'etiti ụlọ ọrụ ahụ, oge a n'etiti SB na Board Board.
N'okwu a, ụlọ ọrụ Enterprise kpebiri na omume SB dị oke anya site na ọrụ nke njikwa. Ebe ọ bụ na ọgbụgba ndụ Eneco kwuru na ekwesịrị inwe mmekọrịta dị n'etiti SB, ndị Board of Management na ndị na-ekenye ha na ire ere, SB ekwesighi ikwe ka ha kpebie n'okwu a n'onwe ha.
Ikpe a gosipụtara n'akụkụ nke ọzọ nke ụdịdị dị iche iche: nkọcha abụghị naanị maka ịda mba kama ọ nwekwara ike ịbụ maka iche na ọ ga - arụ ọrụ (nchịkwa). Kedu ọrụ dị ike enwere ike ime n'ọnọdụ nsogbu? A na-atụle nke a n'okwu na-esonụ.
Ikpe a metụtara inweta Telegraaf Media Groep NV (nke na-esote 'TMG'), ụlọ ọrụ mgbasa ozi ama ama na-elekwasị anya na akụkọ, egwuregwu na ntụrụndụ. E nwere mmadụ abụọ na-aga ime achị: Talpa na a Consortium nke VPE na Mediahuis. Usoro iwere ya bụ nwayọ nwayọ na ozi ezughi ezu. Boardlọ ahụ lekwasịrị anya na Talpa, nke na-ekwekọghị na ịbawanye uru nke ndị na-ekere òkè site na ịmepụta a larịị igwu egwu. Ndị nwere oke mkpesa gbasara nke a na SB, nke nyefere ndị mkpesa ndị a maka ndị njikwa.
Ka oge na-aga, ndị kọmitii ahụ na onye isi oche nke SB guzobere kọmitii na-ahụ maka imezigharị okwu. Onye isi oche ahụ nwere votu ịtụ vootu wee kpebie iso ndị ọrụ ahụ nwee mkparịta ụka, ebe ọ bụ na o yighị ka Talpa ọ ga-abụ onye na-ekenye ndị ọzọ. Ndị otu ahụ jụrụ ịbinye aka na usoro njikọ wee bụrụ ndị SB kagburu. Kama osisi ahụ, SB bịanyere aka na protocol.
Talpa ekwenyeghị na nsonaazụ nke ụlọ ọrụ ahụ wee banye na ụlọ ọrụ Enterprise iji nyochaa iwu nke SB. N'echiche nke OR, omume nke SB ziri ezi. Ọ dị mkpa karịsịa na ụlọ ọrụ ahụ ga-abụrịrị onye ka ukwuu na-ekenye ndị ọzọ na nhọrọ ahụ bụ ihe kwere nghọta. Enterlọ ọrụ Enterprise kwetara na SB enwekwaghị ndidi na njikwa ahụ. Ọjụjụ mbadamba ahụ jụrụ ịbanye na nkwekọrịta njikọ ahụ abụghị maka ọdịmma nke ụlọ ọrụ ahụ n'ihi esemokwu bilitere n'etiti otu TMG. Ebe ọ bụ na SB gara n'ihu na-ekwurịta okwu nke ọma na njikwa ahụ, ọ gafere ọrụ ya iji mee ka mmasị ụlọ ọrụ ahụ nwee mmasị.
Mgbe mkparịta ụka nke ikpe ikpeazụ a, enwere ike ịchọta nkwubi okwu na ọ bụghị naanị ndị njikwa, kamakwa SB nwere ike rụọ oke mkpebi n'oge nsogbu. Agbanyeghi na enweghi iwu ikpe doro anya banyere oria COVID-19, enwere ike mechie ya dabere na ikpe ndị a kpọtụrụ aha n'elu ka achọrọ SB ka ọ rụọ ọrụ karịa ọrụ nyocha ozugbo ọnọdụ dị na mpụga nke arụmọrụ azụmahịa nkịtị (OGEM & Laurus). Ndị SB nwedịrị ike iburu ọrụ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ọdịmma ụlọ ọrụ ahụ nọ n'ihe egwu, ọ bụrụhaala na nke a na mmekorita ya na ndị njikwa otu o kwere mee, nke na-esite na ntụnyere dị n'etiti Eneco na TMG.
You nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ọrụ ndị nlekọta na-ahụ maka oge nsogbu? Mgbe ahụ biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọka iwu anyị nwere ọkaibe na ngalaba iwu ụlọ ọrụ ma na-adị njikere mgbe niile inyere gị aka.
Previous Post Nlekọta nlekọta
Next Post Nkwekọrịta ikike